Rubric: Basa rehondo
18 chinyorwa "b" muID rehondo
18 chinyorwa "b" pane Tiketi Type Type. Chikanda kunze kana kuti usaratidza Type B kune chero munhu, havazo fone munguva yerunyararo. 18 Chinyorwa. Kukanganisika kwehunhu: Chinyorwa chinopa zvakananga (psychopathies, transient ...
Ndeipi daro kubva kumucheto wepabendekete kusvika kune yakamoshwa sergeant? 3! Mukuwirirana neChero Gurukota reDziviriro reRussia Federation kubva ku03.09.2011 N 1500 "Pamirau Yekupfeka Mauto Ehondo uye Zviratidzo ...
Vakapa mubvunzo wemibvunzo kuVoikenkomat kuti vazadze nevabereki vane mibvunzo: data pamusoro pehama uye nekukura kwebhadharo, kugadzirirwa kweimba. Zvechokwadi, zviri pamutemo. Iwe hauna kubvunzwa kuzarura ruzivo rwakavanzika. kana zvakadaro, ipapo ...
B4 nguva yekupedzisira inorevei izvi? kwete-yakakodzera, B-3 ichiri chakanaka. Saka iwe unokodzera basa rechiuto, asi nemiganhu. Mauto, izvo zviri nyore. Apo kusina kudaro chaizvo ...
Nzira yekuenda sei kuNeavy mungarava? Zvinoenderana nendima 14 yeMutemo pamusoro pekunyoreswa kwevagari veRussian Federation, danho rekugadzwa kwemunyori muchimiro, rudzi rwemauto eVarwi Vemauto eRussian Federation, vamwe ...
Chii chisiri chehondo? office of the chief and what does he do? Iye zvino inonzi mapurisa emasoja. Zita racho rinotaura pacharo. 93.2. Zvinonyanya kukosha zvebasa rekuvhara nguva ndezvokuti: kukura kwezviyero uye sangano rekutonga pamusoro ...
Izvo zvakaoma kupinda muchikoro chechiuto uye chii chinodiwa pakugamuchira ??? pane kudaro hakuna. Zvakakosha kuti hurumende yeRussian Federation yaiva kunyange zvazvo gehena ichiziva kuti haisi chakaoma kupfuura yeyunivhesiti inowanzo ...
Izvo zvinotora nguva yakareba sei kubva kune zvakajairika kuenda kune Colonel? Avhareji nguva kubva pachinzvimbo kusvika pachinzvimbo! Pane chero anoziva here? Ichi chikamu chakawanikwa kubva paMutemo pamusoro peiyo Proctionure Yebasa remauto: -—-------------------------------- Article 22. Maitiro ekugadzwa kweimwe chiuto ...
Mubvunzo wekuzvidzivirira kubva kuhondo Kana mwanakomana wako mukoreji achikwanisa kushandisa zviri pamutemo kodzero yake kune imwe yekuzvitungamira, saka iye nenzira yemusango haazopiwi yechipiri deferment. Ini ndinosimbisa - YEMAHARA, t ..
Anoda demob, kana akajekeswa: chii chine tsanga uye chidimbu muuto? Ko dhehenya ringashanda gore here? Thanks advance !!! Tsanga, mhanza, mweya, nezvimwewo, zvakafanana nehondo imwechete-ganda rinoratidza ...
Ndechipi musiyano pakati pekutanga, wechipiri uye wechitatu mapoka evanhu munharaunda? Nzira yekuziva sei nzvimbo yangu? Zera negore rakasimudzirwa gore rapera kuvakuru vakuru nemakore 5.
Ground forces ... ndezvipi izvi .. zvinosanganisirei ..?
Ground mauto ... chii ivo ... chii chinosanganisirwa mavari ..? fl Ground Forces (SV) yakanyanya kuwanda uye dzakasiyana maererano nemauto nemaitiro ehondo kurwisa, rudzi rwemauto Echisimba eRussian Federation (RF Mauto Echisimba), chinangwa ...
Nzira yekusarudza kubva muuto? Kubva kushanda pasi pebvumirano Verenga chibvumirano chako, zvose zviitiko zvekudzingwa kubva mubasa zvinotaurwa ipapo. iwe unoda kunyora mushumo pamusoro pokudzingwa kwekusatenderwa nemitemo yesimboti c) maererano ne ...
Mhemberero yakasvika, ini handina kumubvumira ... ndinofanira kuenda kumabhadharo ebhodi here?
Subpoena yakauya, ini handina kusaina iyo ... ndinosungirwa kuenda kubhodhi rekunyorwa? Zera rekunyorwa, anosungirwa kuenda kuhofisi yekunyoresa muchiuto nekunyoresa, uye izvi zvinoguma nekusiya basa rehondo, asingazive mutemo, ...
Sawa, ndakapiwa basa rekukurumidzira mubato reSemenov, chekuchengetedzwa kwebato, ndingada kuzvidemba here? Kwamakaona kuti kuunganidza mauto ehurumende kunyoresa marara, iwe uchawana mauto ako chete ...
Ndechipi musiyano pakati pemukuru wehurumende mukurasira uye mutariri mune imwe nzvimbo? Mhinduro yekutanga ndiyo yakanyanya kunaka. Kubva mubasa rechiuto vanodzingwa kana vachirasikirwa kana kuti vachichengetwa. Musiyano pakati pavo ndewechokwadi muboka ...
ndiani vashandi vebato revanhu? vashandi vekuenzanisa kwemari ndevashandi vanoshanda mumasangano, masangano, mabhizinesi, nezvimwe zvakadaro. zvivako zvakabhadharwa kubva kumabhadharo akakodzera (federal, nzvimbo kana bhajamiro yebato rinofanira ...
Ndeipi chirongwa che "Fortress" chirongwa? Ndeipi chirongwa che "Fortress" chirongwa? Ndekupi kwandingawana ruzivo pamusoro pemamwe mapurogiramu aripo? Usashungurudza musoro nemashoko asina chaunoda. Unoda kuziva zvose nezvezvirongwa ...
Ndezvipi zvetikiti yehondo uye kupi kunotenga iyo 70 chikamu muSt. Petersburg svondo rekutengesa kuburikidza nemweya wenyanzvi Kusvikira makumi masere makumi masere rubles kana muwandu wemari kana zvimwe zvekuwana mhosva ...
Kudzidzira kodzero kubva kunonyoreswa kwemauto uye hofisi yekunyoresa, kudzidziswa kwemhando B kunogara kwenguva yakareba sei? Nekukumbira kweiyo tsamba, iyo yemauto kunyoresa uye yekunyoresa hofisi inogona kumutumira kunodzidza pachikoro chenguva dzose chekutyaira pasi pechirongwa "kudzidzisa kwevatyairi veboka C ..."
Mibvunzo ye38 mu database yakagadzirwa mu 0,898 masekondi.